» २०७६ साउन ५ गतेदेखि ११ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
५ श्रावण २०७६, आईतवार ०६:१०
मेष : नियमित काममा बाधा पुग्न सक्छ । ईर्ष्या गर्नेहरू बढ्नेछन् भने काम गरेर पनि जस नपाइने समय छ । अरूका लागि समय खर्चनुपर्ला । बुधवारपछि नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ भने मिहिनेत गर्दा चिताएको काम बन्नेछ ।
वृष : यो साता उत्तम छ । रोकिएको काम बन्नुका साथै चिताएका काम सम्पादन गर्न सफल भइनेछ । सहयोगीहरूले मनग्गे फाइदा दिलाउनेछन् । मिहिनेतले अवसर दिलाउनेछ भने प्रतिस्पर्धीहरूले हार खानेछन् । बुधवारपछि पारिवारिक असमझदारीले काममा बाधा होला ।
मिथुन : राम्रो समय छ । दाम्पत्य जीवन सुखद होला । आकस्मिक यात्रा होला । मान्यजनको आशिर्वाद मिल्ने छ । गरिएका काम बाट सन्तुष्टि मिल्ने छ । रोकिएको धन प्राप्ति होला । साताको मध्यबाट कार्यमा केहि बिलम्भ होला ।
कर्कट : प्रियजनसँगको भेटघाटले दिनहरू रमाइलो रहनेछ । लगनशीलताले राम्रै फाइदा दिलाउनेछ । विशेष उपहार प्राप्त हुने समय छ । रमाइलो यात्राका बीच आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइएला । तर सप्ताहान्तमा काम बन्नाले नाम, दाम र इनाम प्राप्त हुन सक्छ ।
सिह : यो साता अनुकूल बन्नुका साथै प्रयत्न गर्दा लक्ष्य पूरा हुनेछ । प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई तह लगाउन सकिनेछ । व्यापारमा फाइदा होला । कामले अरूलाई आकर्षित गर्न सकिनेछ । अप्ठ्यारा चुनौतीहरूलाई पन्छाउने समय छ। रोकिएका धेरै काम बन्नेछन् ।
कन्या : साताको सुरुमा विशेष अवसर जुट्नुका साथै मनग्गे आम्दानी हातलागी हुनेछ । पछिसम्म फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ । यद्यपि बुधबार पछि अर्थ अभावले चिताएको काममा बाधा पुग्नेछ । तर टाढाका साथीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सकिनेछ ।
तुला : रोकिएको काम बन्नुका साथै नयाँ काम सुरु हुनेछ । अवसरले उत्साह जगाउनेछ । सुखदुःखमा साथ दिनेहरू भेटिनेछन् । अरूको भर पर्दा महत्वाकांक्षा अधुरो रहनेछ । ईर्ष्या गर्नेहरूले सताउनेछन् । आँट गर्न नसक्दा काममा पछि परिनेछ ।
वृश्चिक : प्रारम्भमा खर्च बढ्नुका साथै अर्थ अभावले सताउन सक्छ । काम बिग्रने डरले पनि सताउनेछ । बुधबारपछि शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन् भने मिहिनेत गर्दा आँटेको काम बन्नेछ । आलोचकहरूले छिद्र खोतल्ने हुँदा गोपनीयतामा विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला ।
धनु : आफन्त र साथीभाइबाट काममा सहयोग मिल्नेछ । प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । पदासीन व्यक्तिसँग निकटता बढ्नेछ । लगनशीलताले कीर्तिमानी दिलाउन सक्छ । आम्दानीका स्रोतहरू बढ्नेछन् भने मनग्गे धन संग्रह हुनेछ ।
मकर : यो साता मध्यम छ । काममा बाधा र चुनौती देखिनेछन् । अरूको स्वार्थमा उपयोग भइनेछ, सजग रहनुहोला । साताको मध्यबाट व्यवसायबाट सोचेको लाभ मिल्नेछ । अरूको मन जितेर लाभ उठाउन सकिनेछ ।
कुम्भ : आँटले काम बन्नेछन् भने मिहिनेतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ । पुरुषार्थी काम बन्नाले जोश–जाँगर पनि बढ्नेछ । दिगो फाइदा हुने काम प्राप्त हुनेछ । पारिवारिक भेटघाटले मन प्रफुल्लित हुनेछ ।
मीन : तपाईंको लागि यो साता मध्यम छ । अनावश्यक खर्च बढ्न सक्छ । आफन्त भनिएका बाटै धोका होला । स्वास्थमा समस्या देखा पर्ने छ । मनोबल घट्ने छ । तापनि बुधवारदेखि पहिलेका कमजोरीलाई सुधार गर्न सकिनेछ । चुनौतीहरू पार लाग्नेछन् । बुद्धिको उपयोगले गुमेको प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ ।
यस्तो छ वि. सं. २०७७ सालको वार्षिक राशिफल